トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ Hlola isici-umkhuba of pachinko emakhazeni [Horukon Setha Operations]
Lapho abantu abaningi ababekhuphuke ukudlala e sasemakhazeni pachinko, ngicabanga ukuhlola idatha isibani idatha. Uma ungenalo ukubheka idatha, lapho yesikhulumi onjani ukugeleza, engazi uye anayo. Idatha Isibani ulwazi idatha amakhasimende. Ngendlela efanayo njengoba lokhu, siba nesimo emshinini futhi esitolo esikhundleni isibani idatha.
pachinko emakhazeni futhi Horukon, uye wakwazi e umshini okuthiwa isikhathi kube isimo esihleliwe ikhompyutha esitolo yonke idatha. Ikhuluma ngalokho bubonakala Horukon, ukukhuluma elilodwa ngomunye etafuleni amageyimu, inani yenzeka kanye nenombolo jackpot izikhathi kanye nenani ifakwe, futhi, ukuthi lokho iphumele ngesilinganiso kangakanani, iye ukusivumela kuze kube idatha ubizwa ngokuthi uqhekeko umshini wena.
nezinye futhi, futhi ngamunye idatha ehlanganiswe kanye nezitolo yonke idatha ehlanganiswe i Isiqhingi ngasinye, kufanele uphathe ngokunembile ezihlukahlukene idatha.
Horukon, ukuze ube ukwandisa idatha olunembile, esenziwa ukhona, pachinko emakhazeni uhlangothi, uma usheshe watholakala futhi ukwehluleka ukuma kokutholakala Goto isenzo, futhi, futhi Ungahlola izinkinga ezifana wiring iphelelwe enginakho. Ngo
ezitaladini, noma ngafaka indlela bamba ukuthi kuthiwa Horukon bamba. Ngempela, kubonakala sengathi kukhona Horukon ukuthi isenzo esinjalo kungaba. Nokho lokho kuthiwa ukuthunjwa ihholo conserver, okuyinto wathi ibizwa nangokuthi njengoba win ukuqonda umkhuba lokhu Horukon. Ngokuhambisana ushintsho
wenkokhelo okungenzeka ukuba isimo esitolo, kuthiwa ukusebenza kungaba. Njengoba Horukon futhi umshini, ukuthi uyaphuma into okuthiwa umkhuba we umshini.
Ngokwesibonelo, lokho kuvame ukubizwa, ukuze abonise Toka jackpot kuyinto volley zonke olulodwa, ukuze ibhola out, bambalwa izimoto esiqhingini ngasinye, ufake ibhola noma, ithebula ekhoneni kahle kuphela Toka hit, ekupheleni inombolo, kuthiwa uze ukwazi noma kudedelwa ngenhloso wenkokhelo eqenjini elithile.
uya uthwebule ibuke kuba Horukon lungabanjwa indlela.
_x000D Esikhathini _, noma ukubona lapho ngqo is lapho enza Horukon aphambe?
Horukon akuhloselwe ulungise ngamunye ngamunye wenkokhelo fake, kuthiwa okungatholakala ukusetshenziswa ngoba yinhlama ezizukulwane eziningana ngamunye.
Yiqiniso, njengoba e, amayunithi ezifana emihlanu kusukela ekupheleni lokulondoloza iqembu, futhi lokhu kungase udale mass lelula, ngoba lokho kwakuyobonisa ngokusobala osolisayo ukucabanga, noma seqiwe eyodwa, Kakudai noma noma, ihlukaniswe inombolo ngayinye umshini kwaba zonke iziqhingi, nokunye, kukhona iphethini esitolo ezihlukahlukene. Ngu ngal? kwayo, kube kukhulisa ematfuba ukuthola amazwi aqatha.
Horukon nayo salalela inkulumo ukuthi kungaba futhi ezifana ukukhulula ibhola kuphela ngesikhathi esithile. Yini ngokuvamile ukuzama ukukhulula wenkokhelo esitolo yayo noma nini indawo, ungase angene umbono ngokuba khona isikhathi eside. Ngokwesibonelo, lo msebenzi wesikhathi ube isiqongo, ezifana nawe ingagcina ukuthi ufuna ukususa isikhalazo kwamanye amakhasimende ukukhulula wenkokhelo, ekuseni, futhi adedelwa zone encane nesikhathi izilaleli, besekela le Ezivamile kuba ngokugcwele indaba kungenzeka ngangokunokwenzeka.
noma uqhubeke uya ngosuku olufanayo ngesonto, usuku
izoni yesikhathi, ungakwazi umkhuba uyaphuma ukuthi kuyagcinwa ngokucophelela. Payday ngaphambi noma kuqhathaniswa amnandi, ngakho ngalolo noma sweet kungcono ngezinsuku zeviki. Sicela uzame ukugcina izici esitolo ukuthi kweza.
Horukon bamba indlela iwukuba ngokucophelela ngobuhle nangobubi bawo, ahlukane, Abanye abantu bacabanga ukuthi usebenzisa inani ezitolo, kunabantu ongeke zisebenzisa into enjalo. Ngingathi noma, kuyinto eyinzuzo ephathelene Horukon lungabanjwa indlela. Ngaphandle noma okubi Horukon muhle, ngokusobala itafula ethile, isiqhingi esithile kuphela, ngoba ngibona yesehlakalo ukuthi uqubuke kuphela ngezikhathi ezithile suku. Nakuba
ukugembula, pachinko esitolo ukwazi Ungayeki elikhiphe ukuzingela inzuzo.
Futhi, lapho enza uhlobo eqondile umcimbi (isibonelo :! Eva kucocisana okukhulu), ngempela kuphela nail ukulungiswa, noma uzokwazi Liven up the Eva yalesi siqhingi? Kungakhathaliseki ukuthi nail Gabagaba, ozokwelusa ungafuni ukuvula lapho okubeka obala kakhulu kungabonwa, Ngakho ukusho ukuthi, ume onjalo big hit okungenzeka is 1/400 kuyinto, futhi uzokwazi superimpose a sizikhandle jackpot lokho amayunithi UGA?
esengozini ukuvala umcimbi esinjalo, kufanele waphawula ukuhlola Robo idatha. Ingabe ngokucacile Umyeni big hit okungenzeka eliphezulu. into enjalo insakavukela. Ngingenile Ngakho ngenhlonipho ngayo kumuntu othile ngokwezinga Horukon bamba indlela, akuyona lapho izenzo ezinhle.